Guardiola oo qiray in joogitaankiisa Premier League ay ka dhigtay mid kasii fiican waayihiisa Spain iyo Germany – Gool FM
Guardiola oo qiray in joogitaankiisa Premier League ay ka dhigtay mid kasii fiican waayihiisa Spain iyo Germany
(Manchester) 22 Nof 2018. Macalinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in joogitaankiisa horyaalka Premier League ay ka dhigtay mid kasii fiican xiliyadii uu ku sugnaa Spain iyo Germany.
Pep Guardiola oo ku soo hogaamiyay kooxda Manchester City horyaalka Premier League xili ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada Sky Sports wuxuu ku muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay shaqada kooxda Manchester City.
“Waxaan haatan ka fiicanahay xiligii aan ku sugnaa kooxaha Bayern Munich iyo Barcelona, sababtoo ah waxaan bartay sida loola tacaamulo xaaladaha kala duwan ee horyaalkan cajiibka ah”.
“Waxaan qabaneynaa shaqo, dunida oo dhan way daawaneysaa, sidaa daraadeed way fiican tahay”.
“Waa horyaalka ugu adag, sababa la xiriira kulamada laga ciyaaro iyo in garsooreyaashu ay mar walba dalbanayaan inaad ciyaarto, Waxaan qabaa in England uu yahay wadanka kaliya ee heeysta shan ama lix kooxood ee ku guuleysan kara horyaalka”.
Dhinacakale Pep Guardiola ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalkiisa iyo in uu qaban doono shaqada xul qaran mustaqbalka wuxuuna yiri:
“Waqti dhow ama waqti fogba way dhici doontaa, sababtoo ah haatan saddexdii maalinba waxaan ciyaarnaa kulan, intaas kadib waxaan u baahnaan doonaa xogaa daganaan ah iyo inaan ciyaaro golf-ka, iminka ma haysto waqti, sidaas darteed haddii ay jiraan dalabyo waan sugi doonaa”.
Si kastaba Pep Guardiola ayaa kula guuleystay horyaalka Premier League kooxda Manchester City xilli ciyaareedkii hore, waxaana Sky Blues ay haatan hogaamineysaa Premier League.
PSG oo war ka soo saartay Dhaawacyada Neymar iyo Mbappe ka hor kulankooda Liverpool
Saxaafadda Faransiiska iyo Talyaaniga oo isku raacay in Ronaldo iyo Messi aysan ku jirin 3-da isugu soo haray Ballon d'Or...(Haddaba waa kuwee??)